Birmania - Myanmar | Atlante - notizie da tutto il mondo in tempo realeelingua originale
အိန္ဒိယတွင် မြစ်ကမ်းပါးကျိုးပေါက်ပြီး လူ ၅ သိန်းကျော် ရေဘေးသင့်
DVB - Mer, 18/05/2022 - 5:27pm
အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံတို့ထဲကို စီးဝင်တဲ့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး မြစ်တွေထဲက တစင်းဖြစ်တဲ့ ဗြဟ္မပုတြမြစ်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ ၃ ရက်က အာသံပြည်နယ်ထဲမှာ ကမ်းပါးတွေ ကျိုးပေါက်ခဲ့လို့ လူ ၅ သိန်းကျော် ရေဘေးသင့်ခဲ့တယ်လို့ အာသံပြည်နယ် ရေအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးက ရိုက်တာသတင်းဌာနကို ပြောပါတယ်။
ကျန်ခဲ့တဲ့ ၃ ရက်အတွင်း လူ ၇ ယောက် ရေနစ်သေဆုံး၊ ရွာပေါင်း ၁,၅၀၀ ကျော် ရေမြုပ်ခဲ့ပြီး ဟိုဂျိုင်ခရိုင်ထဲမှာ ပိတ်မိနေတဲ့ လူအယောက် ၂,၀၀၀ ကျော်ကို အိန္ဒိယစစ်တပ်က ဘေးလွတ်ရာ ရွှေ့ပေးခဲ့ရပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကို ဆက်လုပ်နေဆဲလို့ ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီး ခေရှက်ဘ် မာဟန်တာက ပြောပါတယ်။
ကျောက်ဆောင် ကျောက်ကမ်းပါး ပေါများတဲ့ အာသံပြည်နယ်အတွင်း မိုးသည်းကြီးမည်းကြီး ရွာခဲ့ပြီး ဒီနေ့ မေ ၁၈ ရက်အထိ ဆက်လက်ရွာသွန်းဆဲပါ။ လာမယ့် ၂ ရက်မှာလည်း မိုးဆက်ရွာမယ်လို့ ကြေညာထားပါတယ်။
မြစ်ရေမျက်နှာပြင်ကလည်း ဆက်ပြီး မြင့်တက်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း အာဏာပိုင်တွေက ပြောပါတယ်။
အဆိုးဆုံး ရေဘေးသင့်ခဲ့တဲ့ ဒီမာဟာဆောင်ခရိုင်မှာ ရေကြီး မြေပြိုတာတွေကြောင့် ရထားလမ်းရော ကားလမ်းတွေပါ ပြတ်တောက်ကုန်တဲ့အတွက် အခြေအနေက အလွန်အမင်း ဆက်လက်ဆိုးရွားနေဆဲပဲလို့ အာသံပြည်နယ် ကပ်ဘေးသက်သာရေး ကြီးကြပ်နေတဲ့ ဝန်ကြီး ဂျိုဂျန် မိုဟန်က ပြောပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်း မြို့တော် ဒေလီ အပါအဝင် တခြားမြို့တွေမှာတော့ အပူလှိုင်းဒဏ်ကို ခံစားနေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Categorie: Birmania - Myanmar
နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး ဖင်လန်နှင့် ဆွီဒင် တရားဝင် လျှောက်လွှာတင်
DVB - Mer, 18/05/2022 - 5:22pm
ဖင်လန်နဲ့ ဆွီဒင်နိုင်ငံတွေဟာ နေတိုး စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းဖို့ နေတိုးဌာနချုပ်မှာ မေ ၁၈ ရက်က တရားဝင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
ရုရှားက ယူကရိန်းကို ကျူးကျော်ခဲ့လို့ ခုလို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်က သီတင်းပတ်အနည်းငယ်သာ ကြာဖို့လည်း မျှော်လင့်ထားပါတယ်။
စစ်အေးခေတ်တလျှောက်လုံးမှာ ဆွီဒင်နဲ့ ဖင်လန်ဟာ ဘက်မလိုက်နိုင်ငံတွေပါ။ နေတိုးနဲ့ပေါင်းဖို့ သူတို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာ ဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်း ဥရောပလုံခြုံရေး ဗိသုကာ အခင်းအကျင်းမှာ အထင်ရှားဆုံး အပြောင်းအလဲ ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။
နေတိုး အတွင်းရေးမှူးချုပ် ယန်းစတော့တန်ဘာ့ဂ်က “မဟာမိတ်တွေအားလုံးရဲ့ လုံခြုံရေး အကျိုးစီးပွားတွေကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့ လိုအပ်ပြီး ပြဿနာအားလုံးကို ဖြတ်ကျော်ရင်း အမြန်ကောက်ချက်ချဖို့ ကျွန်ုပ်တို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်” လို့ ဆွီဒင်နဲ့ ဖင်လန် သံအမတ်ကြီးတွေဆီက လျှောက်လွှာလက်ခံယူတဲ့ အခမ်းအနားမှာ ပြောပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ လျှောက်လွှာတွေကို မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ ၃၀ လုံးရဲ့ လွှတ်တော်တွေက အတည်ပြုဖို့ အချိန်တနှစ်အထိ ကြာနိုင်ကြောင်း သံတမန်တွေက ပြောပါတယ်။
တကယ်လို့ နေတိုး စစ်ရေးမဟာမိတ်အဖွဲ့က စစ်ရေး အခြေခံအဆောက်အဦတွေကို ဆွီဒင်နဲ့ ဖင်လန်မှာ တိုးမြှင့်ချထားတာတွေ စလုပ်မယ်ဆိုရင် ရုရှားက တုံ့ပြန်မယ်လို့ ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာ ပူတင်က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
ဆိုဗီယက်ခေတ်လွန် ကာလမှာ နေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ နယ်ပယ်က ရုရှားနယ်စပ်ရှိရာ ဥရောပအရှေ့ဘက်ဆီကို တိုးချဲ့လာတာဟာ ယူကရိန်းပဋိပက္ခရဲ့ အကြောင်းရင်းပဲလို့ ပူတင်က အကြိမ်ကြိမ် ကိုးကား ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
နေတိုးရဲ့အင်အားကို ချဲ့ထွင်ခြင်းဟာ ခက်ခဲတဲ့ ကမ္ဘာ့လုံခြုံရေး အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးရွားလာစေဖို့ အမေရိကန်က ပြင်းထန်တဲ့နည်းလမ်းကို သုံးနေတာလို့ ပူတင်က စုပေါင်းလုံခြုံရေးစာချုပ်အဖွဲ့ (CSTO) ရဲ့ အစည်းအဝေးမှာ တက်ရောက်လာတဲ့ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ပြောပါတယ်။
ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စုဟောင်း လက်အောက်က ရုရှား ဩဇာလွှမ်းတဲ့ နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ ဘဲလာရုစ်၊ အာမေးနီးယား၊ ကာဇက်စတန်၊ ကာဂျစ်စတန်နဲ့ တာဂျစ်ကစ္စတန်နိုင်ငံတွေ ပါပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်၏ အင်းယားလမ်းနေအိမ်ရောင်းချမှု ဒေါ်လာ ၅ သန်းဖိုးရပြီဟု NUG ထုတ်ပြန်
DVB - Mer, 18/05/2022 - 5:05pm
အာဏာသိမ်း စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ ရန်ကုန်မြို့ အင်းယားလမ်း နေအိမ်ကို ရောင်းချနေရာမှာ သီတင်း ၂ ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅ သန်းဖိုး ရှယ်ယာရောင်းထားရပြီးဖြစ်တာမို့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်သူတွေက ဝယ်ယူပြီးဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ (NUG) က ကြေညာပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် မတရားသဖြင့် ရယူထားတဲ့ ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းယားလမ်းက နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေဟာ ၁ ဒသမ ၈၆ ဧက ကျယ်ဝန်းပြီး ကာလပေါက်ဈေး အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၃၀ ကျော်ရှိပေမဲ့ ကာလတန်ကြေးရဲ့ ၃ ပုံ ၁ ပုံ၊ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်း တန်ဖိုးဖြတ်ပြီး NUG က ရှယ်ယာတစုကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀ သတ်မှတ်ပြီး အစုရှယ်ယာ ၁ သိန်းတိတိ ရောင်းချနေတာပါ။
ဒါဟာ အာဏာရှင် အဆုံးသတ်နိဂုံး (The End of Dictatorship-EOD) အစီအစဉ်ရဲ့ ကနဦးခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးတင်ထွန်းနိုင်က လက်မှတ် ရေးထိုးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
လတ်တလောအချိန်ထိ ရှယ်ယာရောင်းချရမှုတွေထဲက ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းကို ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပက မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဝယ်ခဲ့ကြပြီး ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံသားဟောင်းတွေအပါအဝင် နိုင်ငံခြားသားတွေက ဝယ်ယူခဲ့ကြကာ ရှယ်ယာအစုအများဆုံး ၅၅၄ စု (ဒေါ်လာ ၅ သောင်းခွဲဖိုး) ဝယ်ယူသူကစလို့ အများဆုံး ဝယ်ယူသူ ၁၀ ယောက်ကို ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဲဒီ ၁၀ ယောက်စလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ ဖြစ်ကြပြီး ပြည်တွင်းနဲ့ ပြည်ပက တဝက်လောက်စီ ပါဝင်တယ်လို့ The End of Dictatorship-EOD က ပြောပါတယ်။
“တော်လှန်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့များစွာဖြစ်စေမယ့် ရှယ်ယာများကို ဝယ်ယူခဲ့ကြတဲ့ ပြည်သူများ၊ အခက်အခဲ များစွာကြားမှ ဝယ်သူများအတွက် အကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီး တော်လှန်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာငွေရှာဖွေရေးမှာ စွမ်းစွမ်းတမံ ပါဝင်ပေးနေတဲ့ EOD ရှယ်ယာကိုယ်စားလှယ်များ၊ EOD လုပ်ငန်းစဥ်များ ကောင်းမွန်စွာ လည်ပတ်နိုင်ရန် ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင် EOD အဖွဲ့သားများ အားလုံးကို လေးစားစွာ ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်၊၊”
စစ်ခေါင်းဆောင် မင်းအောင်လှိုင် မတရားသဖြင့် ရယူထားတဲ့ နိုင်ငံတော်ပိုင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အင်းယားလမ်း၊ ခြံအမှတ် ၁၄ က မြေနဲ့အဆောက်အအုံကို ကြိုတင်ရောင်းချနိုင်ရေး ပြည်သူ့ဆန္ဒကောက်ယူတဲ့ စစ်တမ်းတခုကို ဒီမတိုင်ခင်က ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး စစ်တမ်းကောက်တဲ့ ၆ ရက်တာကာလအတွင်း စုစုပေါင်းဆန္ဒပြုသူ ၁၈၀၀၀ ကျော်ရဲ့ ၉၇ ရာခိုင်နှုန်းကျော်က ဝယ်ယူမယ်လို့ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပြီး ဝယ်ယူဖို့ အဆိုပြုပမာဏ စုစုပေါင်းကငွေကျပ် ၃၄ ဘီလီယံကျော် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၇ သန်း) လောက်ရှိပါတယ်။
ဒီရောင်းချမှုကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ “အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက သိမ်းယူထားသော တပ်ပိုင်မြေဆိုင်ရာ အခြေခံမူများ” အပိုဒ် ၄ နဲ့ အပိုဒ် ၅ အရ စီမံဆောင်ရွက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Democratic Voice of Burma - Mer, 18/05/2022 - 4:51pm
A leaked document described by sources to DVB Burmese suggests that the junta has compiledalist of businesspeople, cronies, and others affiliated to the military that it has ruled are now subject to travel bans, blocking them from leaving the country and requiring them to reenter.
The list includes Max Zaw Zaw and U Tay Za, two of Burma’s richest and most high-profile individuals.
There are growing concerns among the upper echelons of Burma’s business community afterarecent spate of arrests and interrogations of leading conglomerate heads.
The secret list was leaked byasource within the military regime and includes 27 names subject to the ban, along with the names of their spouses and children, and their addresses.
DVB Burmese highlights that it has not been able to confirm the authenticity of the list, but sources close to the business community said that there are concerns ofapotential sea change in Naypyidaw,arearranging of those holding the nation’s wealth on behalf of the military.
“They [businessmen] have been charged with corruption. I am not sure how many more will be detained. The rest of the business community is scared because they have arrested the most prominent businessmen first. Chit Khine was charged with corruption after he was arrested at the airport when he returned from abroad,” saidabusinessman close to Burma’s magnates.
The junta has arrested and detained several prominent business figures this year.
The infamous crony Khin Shwe and his son were arrested by the military and sent to Insein Prison in March and the energy, construction and banking magnate Chit Khine wasasecond major crony arrested by the junta while returning from abroad in April. Last week, Nang Lai Kham, the daughter of KBZ conglomerate chief Aung Ko Win and Deputy Chief Executive Officer of Kanbawza Bank was questioned by military intelligence for two hours at Yangon International Airport before being allowed to leave for Bangkok.
An economic analyst, who wished to remain anonymous, told DVB that Burma’s overarching economic paradigm of cronyism was not ideal, but that getting rid of the strongly rooted practice was neither simple or, necessarily, desirable. Many of Burma’s richest individuals made alliances with the previous NLD administration, making joint ventures with leading multinational corporations for the common good of the country.
Despite this, much of the wealth of the group is derived from the extraction of resources from Burma’s ethnic regions,aprocess which facilitates some of the world’s worst human rights abuses.
“Cronies are not good for society, but they are the main pillars of the country. We had to encourage them to use their privileges not only for their own benefit but also for the good of the country. It is not good for the military to take these actions at this time when there isapolitical and economic crisis in the country,” the analyst said.
The leaked document lists the following moguls as being banned from leaving / or forced to reenter Burma:
Khin Shwe (Zaykabar Company)
Aung Ko Win (KBZ Bank Limited)
Zaw Zaw (Max Myanmar)
Tayza (Htoo Trading)
Khin Maung Aye (CB Bank)
Thein Wai (Yoma Bank)
Zaw Win Shein (Aya Hintha/A Bank)
Chit Khaing (MAB Bank)
Kyaw Swar Myint (Gandaye/Business consultant)
Zin Min Aung (PT Power)
Shein Win (Tat Lann Company)
Sai Myo Win (EFD)
Kyaw Win (Shwe Than Lwin)
Hla Myo (Aung Myin Thu)
Nay Htet Thein Naing (Yo Yo Lay)
Toe Naing Man (Than Lwin Education)
Htay Aung (Orchid Hotel)
Htay Myint (Yuzana)
Michel Moe Myint (Moe Myint and Associates)
Win Aung (Dagon International)
Tint Tint Lwin (Tint Tint Company)
San San Ye (Super One)
Aik Htun (Shwe Taung)
Myint Zaw (or) Hansan (Ngapali)
Kyaw Win (Shwe Than Lwin Company)
Win Win Tint (Ocean)
“It is not unreasonable for the junta to ban crony and military-backed businessmen from leaving the country. This is because even high-ranking officials, including administrators appointed by the military, are not safe anymore. It is possible they are gettingahead start [to keep them in the country] because they fearadrain of wealth and talent. Cronies and other military-backed businessmen areasource of income for the junta — but it is also possible they are being kept inside for another reason,”
Seven people, including former ministers Win Khaing and Ohn Win and mogul Chit Khine have been arrested on corruption charges. The coup itself was in part sparked by the military’s allegations of corruption within the NLD administration — prominent amongst such allegations were irregularities over the production and sale of coal from the Tigyit power plant,aproject tendered to businessmen by the NLD’s Ministry of Power and Energy.
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ) ဥက္ကဋ္ဌ ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးသုဝေ ကွယ်လွန်
DVB - Mer, 18/05/2022 - 4:43pm
ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးလည်းဖြစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌလည်း ဖြစ်တဲ့ ဦးသုဝေဟာ မေလ ၁၈ ရက် ဒီနေ့ ည ၇ နာရီလောက်က ကွယ်လွန်သွားတယ်လို့ သူ့ရဲ့မိသားစုက ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
ဦးသုဝေဟာ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ သူ့ရဲ့နေအိမ်မှာ ဒီကနေ့ ညစာစားနေရင်း လဲကျသွားရာက အင်းစိန်ဆေးရုံသို့ ပို့ဆောင်စဉ် ဆေးရုံအရောက်မှာ ကွယ်လွန်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ သူ့သားဖြစ်သူ ဦးဇာနည်က ပြောပါတယ်။
“ထမင်းစားနေရင်းနဲ့ ခေါက်ခနဲဆို လဲသွားတာခင်ဗျ။ အမက ဆေးရုံးသွားမယ် ဆေးရုံသွားမယ် ဆိုပြီးတော့ တက္ကစီပေါ်တင်ပြီးတော့ ဆေးရုံသွားတာ၊ ဆေးရုံရောက်တော့ ဆုံးပြီလို့ ပြောတယ်။”
ဦးသုဝေ ကွယ်လွန်ချိန်မှာ အသက် ၉၀ အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကွန်လွန်ချိန်မှာ ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်မြသန်းနဲ့အတူ သမီးတစ်ယောက်နဲ့ သား ၂ နှစ်ယောက် ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးသူဝေဟာ ဘဝတလျှောက်လုံး နိုင်ငံရေးကို တစိုက်မတ်မတ်လုပ်ဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး သူကွယ်လွန်သွားတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သားဖြစ်သူ ဦးဇာနည်က “သူက မိသားစုအတွက်ထက်တောင် နိုင်ငံအတွက်လုပ်တာ ပိုအချိန်ပေးပါသေးတယ်ဗျာ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဦးသုဝေကို အဘဦးဘအုန်း အမိ ဒေါ်လှတင်တို့ကနေ ၁၉၃၂ ခု ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်မှာ ဇာတိ တောင်ငူမှာ မွေးဖွားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ် အထက်တန်းကျောင်းသား ဘဝကတည်းက နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့သူကာ တောင်ငူခရိုင်ကျောင်းသားသမဂ္ဂခေါင်းဆောင်၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တောင်ငူခရိုင် အတွင်းရေးမှူး၊ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ဒီမိုကရက်တစ်ကျောင်းသားအဖွဲ့ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး စတဲ့တာဝန်တွေ ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဖဆပလ အစိုးရခေတ်မှာ ဒုတိယဝန်ကြီးချုပ် ဦးကျော်​ငြိမ်းရဲ့ ကိုယ်ရေးအတွင်းဝန်အဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ဖူးပါတယ်။
အာဏာရှင်ဦးနေဝင်းကိုဆန့်ကျင်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံကိုထွက်သွားခဲ့ကာ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီပါတီကို ထူထောင်ခဲ့ရာမှာ ဦးနုနဲ့ ဖဆပလခေါင်းဆောင်တချို့နဲ့အတူ ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံမှာ ယူပီအိုင်သတင်းဌာနရဲ့ အရှေ့တောင်အာရှရုံးချုပ် သတင်းအယ်ဒီတာဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကာ ပြည်ချစ်လူငယ်အဖွဲ့မှာဦးဆောင်ပြီး ပြည်ချစ်အသံလွှင့်ဌာနထူထောင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်။
၈၈၈၈ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံအပြီးမှာ ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးအောင်ဦးဆောင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီပါတီမှာ ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာမှာ အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။
စစ်အစိုးရက ဦးသုဝေကို ၁၉၉၃ ခုနှစ်မှာ တကြိမ် ၁၉၉၅ ခုနှစ်မှာ တကြိမ် ဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီး အင်းစိန်အကျဉ်းထောင်မှာ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအဖြစ် ၉ နှဏ်ကျော် ၁၀ နှစ်လောက် ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါတယ်။
ထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးနောက် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာ)ကို ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနုရဲ့ သမီး ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့သမီး ဒေါ်ချိုချိုကျော်ငြိမ်းတို့နဲ့အတူတည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ၂၀၁၅ ပါဝင်ယှဥ်ပြိုင်ခဲ့ပေမဲ့ အနိုင်မရခဲ့ပါဘူး။
ဦးသုဝေဟာ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်လည်း နိုင်ငံရေးပါတီများအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားပြုပြီး ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီတွင် (UPDJC)မှာ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆီးဂိမ်းစ်ပြိုင်ပွဲ၌ မြန်မာအတွက် ၆ ခုမြောက်ရွှေတံဆိပ်ဆုကို ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းမှ ရရှိ
DVB - Mer, 18/05/2022 - 3:42pm
ဗီယက်နမ်မှာကျင်းပနေတဲ့ (၃၁) ကြိမ်မြောက်အရှေ့တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲရဲ့ မေလ ၁၈ ရက်နေ့ပွဲစဉ်တွေ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ရာမှာ မြန်မာအားကစားအဖွဲ့က ဗိုဗီနမ်အားကစားနည်းကနေ နိုင်ငံအတွက် ၆ ခုမြောက် ရွှေတံဆိပ်ဆု ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဗိုဗီနမ်ပြိုင်ပွဲ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်တွဲ လက်နက်မဲ့ အပြပြိုင်ပွဲမှာ ခိုင်ဝါဖူးနဲ့ မေဟန်နီအောင်လွင်တို့က အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်အတွဲကို အနိုင်ယူပြီး ရွှေတံဆိပ်ရယူနိုင်ခဲ့တာပါ။
ဒီနေ့ တခြားပွဲစဉ်တွေမှာတော့ မီတာ ၁၀၀၀ ကနူး/ကယက် လေးယောက်တွဲ (အမျိုးသား)ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုကနေ မြန်မာက ငွေတံဆိပ်တစ်ခုနဲ့ ကြေးတံဆိပ်တစ်ခု၊ မြားပစ် (Recurve Women Team ပြိုင်ပွဲကနေ ကြေးတံဆိပ်တခု၊ တိုက်ကွမ်ဒို ၆၃ ကီလိုတန်းကနေ ဇော်လင်းထက်က ကြေးတံဆိပ်တခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာအားကစားအဖွဲ့ဟာ မေလ ၁၈ ရက် ညနေပိုင်းအထိ ရွေတံဆိပ် ၆ ခု၊ ငွေတံဆိပ် ၇ ခု၊ ကြေးတံဆိပ် ၁၄ ခုရရှိထားပြီး ပြိုင်ပွဲဝင် ၁၁ နိုင်ငံမှာ နိုင်ငံအလိုက် အဆင့် ၇ နေရာမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေပါတယ်။
ဒီနေ့ည ၈ နာရီလောက် အထိ နိုင်ငံအလိုက်အဆင့် ထိပ်ဆုံး ၁ နေရာမှာ အိမ်ရှင်ဗီယက်နမ်က ရွှေတံဆိပ် ၁၂၅ ခုနဲ့ ရပ်တည်နေပြီး၊ ထိုင်းကရွှေတံဆိပ် ၅၀ ခုနဲ့ အဆင့် ၂၊ ဖိလစ်ပိုင်က ရွှေတံဆိပ် ၃၇ ခုနဲ့ အဆင့်၃၊ အင်ဒိုနီးရှားက ရွှေတံဆိပ် ၃၆ ခုနဲ့ အဆင့် ၄၊ စင်ကာပူကရွှေတံဆိပ် ၃၆ ခုနဲ့ အဆင့် ၅ နေရာတွေမှာ အသီးသီးရပ်တည်နေပါတယ်။
ဒီနောက်မှာ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ကမ္ဘောဒီးယား၊ ဘရူနိုင်း၊ လာအိုနဲ့ အရှေ့တီမောနိုင်ငံတွေက အစဉ်လိုက်ရပ်တည်နေပါတယ်။
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 3:00pm
The Thwe Tout group has killed at least 20 people and wagedaterror campaign, forcing party members and their relatives to hide or flee the country.
The post Myanmar NLD Members, Relatives Live in Fear of Attack by Pro-Junta Terror Group appeared first on The Irrawaddy.
နမ့်စန်အခြေစိုက် CJ သတင်းထောက် ၁ ဦး အလုပ်ကြမ်းနှင့် ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခံရ
DVB - Mer, 18/05/2022 - 2:49pm
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ နမ့်စန်မြို့အခြေစိုက် ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမား(CJ) တယောက် ဖြစ်တဲ့ ကိုသန်းစိုးအောင်ကို စစ်ကောင်စီတရားရုံးက ဒီကနေ့ မေလ ၁၈ ရက်မှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ် ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
သတင်းထောက် ကိုသန်းစိုးအောင်ကို မတ်လပိုင်းက စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပုဒ်မ-၅၂(က)နဲ့ တရားစွဲဆိုကာ ဒီကနေ့မှာ အလုပ်ကြမ်းနဲ့ ထောင်ဒဏ် ၅ နှစ်ချမှတ်ခဲ့လို့ သူနဲ့ နီးစပ်တဲ့ အသိုက်အဝန်းက သိရပါတယ်။
၂၀၂၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက် စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက် စစ်ကောင်စီက သတင်းသမား ၃ ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့ပြီး ၁၁၅ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့ကာ ၅၇ ဦးကတော့ ဖမ်းဆီးခံထားရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေကို ဖမ်းဆီးထောင်ချမှု အများဆုံး ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေစာရင်းမှာ တရုတ်နိုင်ငံပြီးရင် မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ ပြင်သစ်အခြေစိုက် နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များအဖွဲ့ကနေ သိရပါတယ်။
Myanmar News Net - Mer, 18/05/2022 - 2:44pm
YANGON, May 18 (Xinhua) -- Another batch of China-donated COVID-19 vaccines arrived in Myanmar's Yangon on Wednesday, saidastatement from the Chinese Embassy in Myanmar.
Of the 10 million doses of the Sinopharm COVID-19 vaccines that China will donate to Myanmar,5million doses arrived at the Yangon International Airport on Wednesday morning, along with 1.98 million syringes donated by the Chinese government.
ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်ပတ်သက်၍ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို တရားစွဲသည့်အမှု စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင့်သင့် လျှောက်လဲ
DVB - Mer, 18/05/2022 - 2:41pm
ပြည်သူတွေကို ကူညီပေးဖို့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ် စစ်ကောင်စီက စွဲဆိုထားတဲ့ အဂတိမှုတွေအတွက် မေလ ၁၇ ရက် ဒီကနေ့ ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပါတယ်။
ဒီနေ့ရုံးချိန်းမှာ ဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ စွဲချက်တင်သင့်၊ မတင်သင့် လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့တယ်လို့ တရားရုံးနဲ့နီးစပ်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်းကနေ သိရပြီး ဘယ်လိုလျှောက်လဲချက်တွေ ပေးလည်းဆိုတာ မသိရပေမဲ့ နောက်ရုံးချိန်းမှာ စွဲချက်တင်သင့် မတင်သင့် အမိန့်ချမယ်လို့ တရားရုံးနဲ့နီးစပ်သူတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ချေဖျက်ပေးဖို့ လျှောက်ထားတာကို မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့က ပယ်ချလိုက်ကြောင်းကို ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ရန်ကုန်ရှိ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်(ရုံးချုပ်) မြေ ၁ ဒသမ ၈၆ ဧကနဲ့ အဆောက်အဦတို့ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဖောက်ဖျက်ပြီး ထိုက်သင့်တဲ့ တန်ဖိုးမပေးဘဲ လျော့နည်းသက်သာတဲ့ နှုန်းထားနဲ့ ငှားရမ်းမှု၊ နေပြည်တော်မှာ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းက ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လရောင်တော စိုက်ပျိုးသက်မွေးပညာ သင်တန်းကျောင်းစီမံကိန်းဆောက်လုပ်ဖို့ မြေ ၁၀၁ ဒသမ ၃၃ ဧက ချထားပေးမှု၊ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်မှာ မြေ ၂၃ ဒသမ ၈၅၅ ဧက ချထားပေးမှု၊ နေပြည်တော်ရှိ လရောင်တောစီမံကိန်းအတွင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေထိုင်ဖို့အတွက် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း အလှူငွေထဲက ကျပ် ၁ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ သုံးစွဲမှုတို့အတွက် အဂတိမှုတွေနဲ့ စွဲဆိုထားတာပါ။
ဒီအမှုတွေမှာ နေပြည်တော်မြို့တော်၀န် ဒေါက်တာမျိုးအောင်၊ ဒုတိယမြို့တော်၀န် ဦးရဲမင်းဦး၊ နေပြည်တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၀င် ဦးမင်းသူတို့လည်း အမှုတွဲအဖြစ် စွပ်စွဲခံရတဲ့အထဲ ပါ၀င်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ကောင်စီရဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စွပ်စွဲခံရသူတွေဘက်က ပြန်လည်ချေပပြောဆိုနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေး မရရှိသေးပါဘူး။
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 2:38pm
Fuel importers say they are struggling to ensure supplies because of the regime’s restrictions on foreign exchange.
The post Myanmar Fuel Importers Blame Shortages on Junta Dollar Controls appeared first on The Irrawaddy.
SME စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များကို အချိုးကျ ခွဲတမ်းစနစ်ဖြင့် စက်သုံးဆီ ရောင်းပေးမည်
DVB - Mer, 18/05/2022 - 2:12pm
အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်သုံးဆီဆိုင်တွေကို အချိုးကျစနစ်နဲ့ စက်သုံးဆီ ခွဲဝေရောင်းချပေးသွားမယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီ တင်သွင်း ရောင်းချဖြန့်ဖြူးရေးအသင်း (MPTA) က မေလ ၁၈ရက်နေ့မှာ ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
အသေးစားနဲ့ အလတ်စား စက်သုံးဆီဆိုင်လုပ်ငန်းများကော်မတီ အစည်းအဝေးချက်အရ ဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့ စက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင် ၂၆၀ ကျော်ကို အချိုးကျစနစ်နဲ့ ခွဲဝေရောင်းချပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
စက်သုံးဆီ တင်သွင်းသူတွေထံက ခွဲဝေရောင်းချပေးဖို့ ကတိပြုထားတဲ့ ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ ၂,၅၅၀,၀၀၀လီတာ၊ Ron 92- ၅၀၀,၀၀၀ လီတာ နဲ့ Ron 95 ၅၀၀,၀၀၀ လီတာ တို့ကို ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို ရိုးရိုးဒီဇယ်ဆီ (၈၉၀၀)လီတာ၊ Ron 92(၁၇၀၀)လီတာ၊Ron 95 (၁၇၀၀) လီတာနှုန်း စီ အချိုးကျဝယ်ယူခွင့်ပေးမယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝယ်ယူခွင့်ရရှိတဲ့ ဆိုင်တွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ စက်သုံးဆီတင်သွင်းသူ ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မေလ ၂၅ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ဝယ်ယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဝယ်ယူရမဲ့ စက်သုံးဆီစျေး သတ်မှတ်ချက်က စက်သုံးဆီတင်သွင်း သိုလှောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ (PPRD) က ထုတ်ပြန်တဲ့ လက်ကားရည်ညွှန်းစျေးအတိုင်း ဝယ်ယူရမယ်လို့ သိရပါတယ်။
လတ်တလော လက်လီစျေးကွက်အတွင်းမှာလည်း စက်သုံးဆီ တစ်လီတာကို ၂၂၀၀ ကျပ် ဝန်းကျင်ထိ မြင့်တက်နေပြီး အသေးစားစက်သုံးဆီလက်လီ ရောင်းဆိုင်တွေအနေနဲ့လည်း ဆီဝယ်ယူရခက်တဲ့ အခြေအနေတွေ ဖြစ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သင်္ကြန်အပြီး ပြည်တွင်းစျေးကွက်မှာ စက်သုံးဆီကို ပမာဏကန့်အသတ်နဲ့ တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းဝယ်ယူရတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်တွင် မိုးကြိုးပစ်၊ ၁ ဦးသေဆုံးပြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာရ
DVB - Mer, 18/05/2022 - 1:58pm
မန္တလေးတိုင်း၊ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်၊ ဂုဏ်ရွာမှာ မေ ၁၇ ရက် ည ၁၀ နာရီလောက်က မိသားစု စကားထိုင်ပြောနေစဉ် မိုးကြိုးပစ်တာကြောင့် အမျိုးသမီး ၁ ဦး သေဆုံးပြီး ၂ ဦး ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ ဒေသခံတဦးက ပြောပါတယ်။
“နေအိမ်အဖီချထားတဲ့အောက်မှာ မိသားစု ၆ ယောက် ထိုင်စကားပြောနေကြတာ၊ မီးနီလုံးကြီး ဝင်လာတယ်၊ မဆန်းဝင်းကျောကို ထိတယ် နေရာတင်သေဆုံးသွားတယ်။ ဘေးကထိုင်နေတဲ့ သားနဲ့ ချွေးမကိုတော့ အဖျားခတ်သွားတယ်၊ မစိုးရိမ်ရပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
၂၀၂၂ ခုနှစ်ထဲမှာ မိုးတွေသဲသဲမဲမဲရွာပြီး မိုးကြိုးပစ်ခံရတာ ဝမ်းတွင်းမြို့နယ်ထဲမှာ ပထမဆုံး ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
မိုးကြိုးပစ်လို့ အသက် ၅၃ နှစ်ရှိ မဆန်းဝင်း သေဆုံးပြီး သားဖြစ်သူ ကိုမင်းခိုင်နဲ့ ချွေးမဖြစ်သူ မသဲသဲတို့ မိုးကြိုးစက်ကွင်းထိခဲ့ပေမယ့် မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ သိရပါတယ်။
DVB - Mer, 18/05/2022 - 1:51pm
မန္တလေးတိုင်း၊ မိုးကုတ်မြို့အရှေ့ပိုင်း မြို့မရပ်ကွက်က ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအိမ်ရာကို မေ ၁၇ ရက် နေ့ခင်းပိုင်းက စစ်ကောင်စီတပ်တွေ သော့ဖျက် ဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီး လူငယ်တဦးကို ရိုက်နှက်ထားတယ်လို့ မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။
“အဲဒီလိုင်းခန်းက CDM ဝင်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ များတယ်၊ တချို့တွေက PDF ဆေးတပ်ထဲ ဝင်ကုန်ကြတာများတယ်၊ ရှောင်ပုန်းနေရတာက နောက်ကြောင်းမလုံ စိတ်မချလို့တဲ့၊ ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းမှန်သမျှ သော့တွေဖျက်ပြီး ဝင်ရှာတာ” လို့ မြင်တွေ့သူတဦးက ပြောပါတယ်။
စစ်ကောင်စီတပ်တွေက အိမ်စီးကား ၇ စီး၊ အရပ်ဝတ်တွေနဲ့ သေနတ်တွေလွယ်ကာ သော့ခတ်ထားတဲ့ ဝန်ထမ်းအိမ်တွေကို ရိုက်ဖျက် ရှာဖွေနေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မျက်မြင်တွေ့သူက “တွေ့ခဲ့တာတော့ ဝင်ပေါက်မှာ လူငယ်တယောက်ကို ပေါင်ကြားကို ကန်ခံထားရလား မသိဘူး၊ လက်နဲ့အုပ်ပြီး မျက်နှာရှုံ့မဲ့ပြီး အော်နေတာ” လို့ ပြောပါတယ်။
ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူ မရှိဘူးလို့ သိရပြီး ဝန်ထမ်းတွေက သူတို့ပစ္စည်းတွေကို အကုန်သိမ်းထားတဲ့အတွက် မရှိတော့ဘဲ အခန်းတွေကို အလွတ်ကြီးပဲ သော့ခတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 1:42pm
The post Military-Owned Corporation Fails to Pay Dividends to Myanmar Troops appeared first on The Irrawaddy.
Myanmar News Net - Mer, 18/05/2022 - 12:55pm
New Delhi [India], May 18 (ANI): The friendship between India and Myanmar is age-old and has stood the test of time. Both countries have many things in common as they share strong historical, cultural, religious and trade ties. People from both countries developed and managed to sustain trust and cordial relations so far. It can be gauged from the fact that notasingle case of conflict has been reported yet though both c
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 12:25pm
The junta has compiledablacklist of members of the civil disobedience movement to prevent them from leaving Myanmar.
The post Striking Myanmar Civil Servants Denied Passports appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 12:04pm
The post Myanmar Ports key to China’s Strategy of Controlling Indian Ocean appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 11:39am
Resistance forces ambushedaregime flotilla traveling through restive Sagaing Region.
The post Ten Junta Soldiers Killed in Upper Myanmar Mine Attacks appeared first on The Irrawaddy.
Irrawaddy - Mer, 18/05/2022 - 10:02am
Residents report increased patrols and searches by security forces, who appear to be mounting an operation to wipe out resistance activity in the city.
The post Myanmar Junta Tightens Security in Commercial Capital Yangon appeared first on The Irrawaddy.